रंगमञ्च Archives - Purbeli News
English रंगमञ्च	१४ दिनपछि आयो कपिल शर्माको ट्विट, यस्तो लेखे	काठमाण्डौ। सहकर्मी सुनिल ग्रोभर, चन्नद प्रभाकर, अली असगरसँगको विवादपछि सामाजिक सञ्जालबाट हराएका कमेडियन कपिल शर्मा १४ दिनपछि ट्विटरमा फर्किएका छन् । ट्विटरमा कपिलले अन्तिम पोष्ट २० मार्चमा सुनिलसँग माफी मागेका थिए । १४ दिनपछि ट्विटरमा पोष्ट गर्दै कपिलले आफू राजस्थानको जंगलमा सुटिङमा व्यस्त भएका कारण अनलाइन हुन नपाएको जानकारी दिएका छन् र सबैलाई माया...	चैत २४ देखि थिएटर मलमा ‘आन्दोलन’	काठमाडौं । फेरि चैत २४ गते शक्रबारदेखि ‘आन्दोलन’ सुरु हुने भएको छ । यो आन्दोलन पनि ६२/६३ को आन्दोलनजस्तै १९ दिनसम्म चल्नेछ । यो पटक ‘आन्दोलन’ सडकमा नभई काठमाडौं मल सुनधारास्थित नाटकघर थिएटर मलमा हुन लागेको हो । सौरभ कार्कीको योजनामा सुदाम सिकेले ‘आन्दोलन’ नेतृत्व गर्दैछन् । ०४६ तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सुरुवात भएको विशेष र ऐतिहासिक दिन चैत २४ बाटै ...	बले कक्रोच अमेरिका जाँदा यस्तो दृश्य पनि देखियो	काठमाडौं । कलाकार सागर लम्साल (बले) र हरी निरौला (कक्रोच) सोमबार साँझ अमेरिका गएका छन् । हाँस्य टेलिसिरियल भद्रगोलका चर्चित यी कलाकार एक महिनाको नेपाली कार्यक्रमका लागि अमेरिका गएका हुन् । इटीहार्ड एअरलाईन्सबाट अमेरिका गएका उनीहरुलाई बिदाई गर्नका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कलाकार कुमार कट्टेल (जिग्री), गायक शिव हमाल, उनीहरुका आफन्त र...	साथी कलाकार पिट्ने कपिल शर्मालाई सलमानले यस्तो भने	सलमान खान तथा कपिल शर्मा एकअर्काका राम्रा साथी हुन्। उनै मित्रलाई सलमानले आफ्नो स्टारडमलाई नियन्त्रणमा राख्न सुझाव दिएका छन्। सलमानले हालै कपिलले द्वारा आफ्ना सहकर्मी कलाकारलाई दुर्व्बहार गरेको घटनाप्रति इंगित गर्दे सुध्रन भन्दै यस्तो भनेका हुन्। कपिलले आफ्नो चर्चित कमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो'मा डा. मशहुर गुलाटीको भूमिकामा देखिने गरेका कलाकार सुनिल ...	यस कारण एक्लिए कपिल शर्मा, सेलेब्रेटी पनि आउन चाहेनन् शोमा !	कपिल शर्माका लागि समस्याहरुको ओइरो नै लागेको छ। हालै ‘द कपिल शर्मा शो’ बाट कपिलका सहकर्मीहरु सुनिल ग्रोवर, अली असगर र चन्दन प्रभाकरले शो छाडे। उनीहरु शोमा नभएपछि निर्माताले राजु श्रीवास्तव, एहसान कुरेसी र सुनील पललाई बोलाएका थिए। तर कपिल अहिले एकदमै एक्ला भएका छन्। किनकि उनको कार्यक्रमको टोली त उनले गुमाए नै कार्यक्रममा अतिथि समेत कोही भएनन्। बलिउड...	अाफ्नै व्यवहारले यसरी एक्लिए कपिल शर्मा	चर्चित ‘द कपिल शर्मा शो’ बाट सहभाकर्मीहरुले एकाएक साथ छोड्दै गएपछि कपिल शर्मा एक्लिएका छन् । शोमा समस्याहरुको ओइरो लाग्न थालेपछि कपिलका सहकर्मीहरु सुनिल ग्रोवर, अली असगर र चन्दन प्रभाकरले शो छाडेका हुन् । उनीहरु शोमा नभएपछि निर्माताले राजु श्रीवास्तव, एहसान कुरेसी र सुनील पललाई बोलाएका थिए। तर कपिल अहिले एकदमै एक्ला भएका छन्। किनकि उनको कार्यक्रमको...	भद्रगोलका जयन्तेले चामल धेरै भएर पैसा माग्ने मन बनाएपछि…	काठमाडौं। टेलिसिरियल भद्रगोलमा जयन्तेको भूमिका निभाएर चर्चित भएका कलाकार गोविन्द कोइरालालाई अब चामल नभएर पैसा माग्न मन लागेको छ । भद्रगोलमा उनले बोल्ने सम्वाद ‘काका चामलको भात खाने केटीसँग विहे गर्नुपर्छ ! ह्या... ह्या..हाँसो’लाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् । हालै मात्रहामीले चामलको भात खान चाहने जयन्तेसँग कुराकानी गर्ने मौका पाएका छौँ । यस क्रममा उनल...	माफि मागेका कपिललाई सुनिलले दिए यस्तो जवाफ	काठमाण्डौ। एक साथ कमेडी शोमा अभिनय गर्ने कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोभरबीच विवाद बढ्दै गएको छ। दुवैबीच भएको झगडाका खबर पश्चात कपिलले आफ्नो कुरा राखे, माफी मागे र अब सुनिल ग्रोभरको जवाफ आएको छ । कपिलले ट्वीट गरेका थिए ‘पाजी, सुनिल ग्रोवर सरी, मैले अन्जानमा चोट पुर्याए। तिमीलाई राम्रोसंग थाहा छ कि म कति प्रेम गर्छु। म पनि अपसेट छु। प्रेम र शुभकामना सधै।’
...	कपिल शर्माले सुनिल ग्रोवरलाई ‘नोकर’ भनेपछि…	काठमाण्डौ। चर्चित भारतीय कमेडियन कपिल शर्मा आफ्नो लोकप्रियताका कारण घमण्डी बन्दै गएका खवर सार्वजनिक भइरहेका छन् । घमण्डीपनकै कारण अन्यमाथी उनले गर्ने गलत व्यवहार पछिल्लो पटक बढ्दै गएका छन् । द कपिल शर्मा शोका सहकर्मी सुनिल ग्रोवरमाथी उनले पछिल्लो पटक गरेको गालीगलौज र हातपातका कारण उनी यतिबेला फेरि विवादमा आएकाछन् ।
हालै अष्ट्रेलियाको मेलबर्नबाट मु...	लघु चलचित्र “लिभिङ टुगेदर” को शो सम्पन्न	कोसीहरैँचा । विराटचोक स्थित सुकुना चलचित्र मन्दिरमा चेतनामूलक नेपाली लघु चलचित्र “लिभिङ टुगेदर” को प्रदर्शन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस चलचित्रको कथावस्तु समसामयिक सामाजिक विकृतिलाई औँल्याउँदै यसको नकारात्मक पाटोको प्रस्तुतिमा केन्द्रित रहेको छ । पढ्ने छोराछोरीलाई चाहिने खर्चको व्यवस्था गरिदिई पढ्न टाढा पठाउने र उनीहरुको चाला नबुझी पढिरहेको कु...	१२३›»